आज कहाँ-कहाँ थपिए कोरोना संक्रमित ? (सूचीसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आज कहाँ-कहाँ थपिए कोरोना संक्रमित ? (सूचीसहित)
आज कहाँ-कहाँ थपिए कोरोना संक्रमित ? (सूचीसहित)
भदौ ७ गते, २०७७ - १७:४४
काठमाडौं । नेपालमा आज हिजोका तुलानामा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । आज नेपालमा ८ सय १८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । हिजो ६ सय ३४ जनामा कोरोना देखिएको थियो ।
आज पुष्टि भएका ८१८ संक्रमितमध्ये २२० महिला र ५९८ पुरुष रहेका छन् ।
योसँगै संक्रमितको कूल संख्या ३१ हजार ९ सय ३५ पुगेको छ । जसमध्ये अहिले विभिन्न जिल्लामा १३ हजार १ सय ५५ जना संक्रिय संक्रमित छन् ।
आज सबैभन्दा बढी बारामा संक्रमित भेटिएका छन् । त्यहाँ एकैदिन बारामा १३९ जनाको पीसीआर पोजिटिभ देखिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ६६ संक्रमित थपिएका छन् । गत २४ घण्टामा झापामा १०, मोरङमा ५०, सुनसरीमा ९, सप्तरीमा ४, सिरहामा १४, धनुषामा ६० र महोत्तरीमा ३४ जना संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सर्लाहीका ९१, पर्साका ३९, रौतहटमा ९, सिन्धुलीका १, रामेछापका २, दोलखाका ६, भक्तपुरका २८, धादिङका १, काठमाडौंका १२६, काभ्रेका २७, ललितपुरका १२ जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नुवाकोट, मकवानपुरमा १र१, गोरखामा २, कास्कीमा ५, पूर्वी नवलपरासीमा ६ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
कपिलवस्तुमा ११, पश्चिम नवलपरासीमा ३० र रूपन्देहीमा २८ जना थपिएका छन् । अर्घाखाँचीमा १२ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
यस्तै पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा एकएक जना संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाँकेमा ११ जना थपिएका छन् भने बर्दियामा थप २ जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पश्चिम रुकुममा आइतबार ६ जना संक्रमित थपिए ।
यस्तै जुम्लामा २, अछाममा २३, बझाङमा ३, डडेल्धुरामा २, बैतडी र दार्चुलामा १र१ जनामा संक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ८१ डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म निको हुनेको संख्या १८ हजार ६ सय ३१ पुगेको छ । अहिले देशभर ११ हजार ४ सय १४ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । आज उपत्यकामा १ सय २६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
जसमध्ये काठमाडौंका १ सय २६, ललितपुरका १२ र भक्तपुरका २८ जना रहेका छन् । आज देशभर ८ हजार २६ जनाको पीसीआर गरिएको छ ।
भदौ ७ गते, २०७७ - १७:४४ मा प्रकाशित